PressReader - Ilanga: 2017-09-14 - Kuyingozi ukuzisebenzisa budedengu izinsuku zekhefu lokugula
Kuyingozi ukuzisebenzisa budedengu izinsuku zekhefu lokugula
Ilanga - 2017-09-14 - Relationships & Love Issues - LUCKY CAIN lucky.cain@ ilanganews. co.za
IMPILO yakho ibalulekile yingakho nezinkampani ziba nekhefu elisemthethweni lokuphumula kanti uma kwenzeka uxinwa wukugula likhona futhi nelibhekelela kona.
Kuyaye kube kubi uma uzwa ngezigameko ezenziwa ngabantu abasebenzayo behlangene nabanye odokotela besebenzisa budedengu izinsuku zekhefu lokugula kwabo.
Ngokocwaningo lwakamuva olwenziwe ngabe-Occupational Care South Africa luveza ukuthi umnotho wezwe ulahlekelwa cishe u-R6 billion ngezisebenzi ezisebenzisa budedengu izinsuku zekhefu lokugula ( sick leave).
Lolu cwaningo ludalula ukuthi zibalelwa ku-15% izisebenzi eziphutha emsebenzini nsuku zonke. Luphinde luveze nokuthi kwabathathu kwabasuke bephuthe emsebenzini uyedwa kuphela ogula ngempela.
UCathie Webb weSouth African Payroll Association phambili utshele iTimeslive ukuthi kunezisebenzi ezibona izinsuku zekhefu lokugula njengethuba lokuziphumulela emakhaya noma bengaguli.
Ucwaningo luveza ukuthi nakuba isimo sengcindezi senyukile ezindaweni zokusebenza kodwa izisebenzi kume lezi kuqonde ukuthi ziqashiwe futhi kufanele zisebenze ngokwe sivumelwano sokuqashwa kwazo.
Izisebenzi mazikuqonde ukuthi ukusebenzisa budedengu izinsuku zekhefu lokugula ngeke kugcine ngokuthikameza ukusebenza kwenkampani kodwa nazo zingazithola zisesimeni esinzima.
Uma kwenzeka sezigula ngempela zingasenazo izinsuku kungakapakela kulezo zekhefu lokuphumula elisemthethweni kanti uma zingasekho kungaze kufinyelele kulelo elingakhokhelwa.
Lokhu kungaba nomthelela omubi esimeni sakho njengesisebenzi sezimali. Uma izisebenzi zisebenzisa budedengu izinsuku zekhefu lokugula kungaba kubi kakhulu enkampanini njengoba lokhu kungehlisa ezinye umfutho wokuqhubeka nokusebenza kanti kungalimaza nenzuzo yayo ngokuhamba kwesikhathi.
Kubalulekile ukuba izinkampani nezisebenzi ziyiqonde imigudu efanele yokuthathwa kwekhefu lokugula. Kumele izisebenzi zazi ukuthi kumele zibike kubani uma zingazizwa kahle empilweni futhi ukuqhubeka nokusebenza zingaphilile kungaba namuphi umthe
lela. Akuvumelekile kunoma iyiphi inkampani ukuphutha emsebenzini ngaphandle kokubika ngisho noma ngabe uxineke kanjani. Yingakho kumele kube nesihlobo noma osondelene nawe onezinombolo zasemsebenzini noma zomphathi wakho ukuze uma kwenzeka ubambeka ngokweqile kube nguyena okubikayo.
Ezinye izinkampani zinomgomo wokuthi uma zingaqondi kahle ngokugula kwakho zikuyise kudokotela wazo ozoqinisekisa ukuthi ugula ngempela.
Akubalulekile ukuba izisebenzi zize zidalule ukugula kwazo kubaphathi kodwa banelungelo lokwazi ngesimo sempilo yakho ukuze uma kudingakala kwenziwe eminye imizamo yokuba usizakale.
Zikhona futhi izinkampani ezingenelelayo zikusize ngosizo lezokwelapha oluyisipesheli uma ukugula kwakho kufinyelela kuleso sigaba.
Kubalulekile ukuba izinkampani zibeke eqhulwini isimo sokuba wumqemane kwezisebenzi ukuze zingazitholi zilahlekelwa yizizumbulu ngokugula kwezisebenzi.
Kunoma yimuphi umsebenzi kusemqoka ukuba izisebenzi zihlale zivikelekile kunoma yikuphi okungaba yingozi kuzona okubalwa na-makhemikhali nokunye okungakhubaza impilo yazo.
ISITHOMBE NGABE: HUFFPOST.COM
ZISEBENZISE uma kunesidingo izinsuku zokugula emsebenzini.
NAMHLANJE sithi TBT kuThandiswa Mazwai ongumculi odumile eNingizimu Afrika, nodadewabo uNtsiki oyimbongi. Kumnandi ukubona izithombe zalolu hlobo eziveza osaziwayo besakhula, kubonakale ukuthi abavelange nje benyukela esigabeni sempilo esiphezulu kodwa baqale lapho sonke sidlule khona.
ISITHOMBE YI: INSTAGRAM